Etika fanontana | Fitsangatsanganana tanteraka | Fitsangatsanganana tanteraka
Hentitra sy mangarahara.
Ny politikam-panoratanay dia mifototra amin'ireo teboka 7 izay miantoka fa ho henjana, marina, mendri-pitokisana ary mangarahara ny atiny rehetra.
Tianay ho mora aminao ny mahalala izay manoratra izay eo amin'ny tontolo iainantsika sy ny fahalalantsika tsy maintsy ataonao izany.
Tianay ho fantatrareo ny loharanom-baovao, iza no nahazo aingam-panahy antsika ary ny fitaovana sy ny fitaovana ampiasaintsika.
Miasa izahay mba hahatanteraka izany rehetra izany amin'ny alàlan'ny fanomezana ny mpamaky fahafaha-mampahafantatra anay izay lesoka hitany sy ny fanatsarana tian-dry zareo hatolotra.
Amin'ny Internet misy aretina infoxication, zava-dehibe indrindra ny fahaizana manavaka ny haino aman-jery azo antoka sy tsy azo atokisana.
Miorina amin'ny etika 7 ny etikan'ny famoahana, izay hampivelarinay etsy ambany:
Ny vaovao rehetra avoakanay nohamarinina hahazoana antoka fa marina izany. Mba hahatratrarana an'io tanjona io, dia manandrana manoratra ny tenanay amin'ny loharano voalohany izahay, izay ifantohan'ny vaovao, ary amin'izany dia hialana ny tsy fifankahazoan-kevitra na ny fandikana tsy marina ny vaovao.
Tsy manana tombontsoa ara-politika na ara-barotra izahay ary manoratra amin'ny tsy fiandaniana, manandrana tanjona araka izay tratra rehefa mandefa vaovao sy manolotra ny fahaizantsika amin'ny famerenana sy fampitahana ny vokatra.
Fantatry ny tonian-dahatsoratra tsirairay tsara ny lohahevitra izay mandeha. Mifampiraharaha amin'ny manam-pahaizana amin'ny sehatra tsirairay izahay. Ireo olona mampiseho isan'andro hanana fahalalana lehibe amin'ny lohahevitra soratany. Mba hahafantaranao azy ireo dia mamela fampahalalana momba azy ireo izahay ary mifandray amin'ny piraofilina sosialy sy tantaram-piainany.
Ny votoatiny tany am-boalohany
Ny atiny rehetra navoakanay dia tany am-boalohany. Tsy maka tahaka na mandika amin'ny haino aman-jery hafa izahay. Mifandray amin'ireo loharano mifandraika amin'izany izahay raha nampiasainay, ary mitanisa ny tompona sary, haino aman-jery ary loharanom-pahalalana ampiasainay izahay hanomezana fanazavana marina indrindra azo atao, manome ny fahefana mifandraika amin'izany.
Tsia amin'ny Clickbait
Tsy mampiasa lohateny sandoka na manaitra izahay mba hisarihana ny mpamaky nefa tsy misy vaovao tsy maintsy atao. Hentitra sy marina izahay, ka ny lohatenin'ny lahatsoratray dia mifanaraka amin'izay ho hitanao amin'ny atinay. Tsy manome fanantenana momba ny atiny izay tsy ao anatin'ny vatan'ny vaovao izahay.
Kalitao sy faran'izay tsara ny atiny
Mamorona lahatsoratra sy atiny misy kalitao izahay ary tsy mitsahatra mitady hatsarana amin'izany isika. Miezaka ny hikarakara ny antsipiriany rehetra ary hampanakaiky kokoa ny mpamaky ny vaovao tadiaviny sy ilainy.
Isaky ny mahita hadisoana isika na mampita izany aminay, mandinika sy manitsy azy isika. Manana rafitra fanaraha-maso ny lesoka anatiny izahay izay manampy anay hanatsara hatrany ny lahatsoratray, ary koa hisorohana azy ireo tsy hitranga intsony amin'ny ho avy.
Manatsara ny atiny ao amin'ny tranokalanay izahay. Amin'ny lafiny iray, fanitsiana lesoka ary, amin'ny lafiny iray, fanitarana fampianarana sy atiny maharitra. Noho io fomba fanao io, ny atin'ny tranonkala rehetra dia navadika ho atiny mahasoa sy ilaina amin'ny mpamaky rehetra, isaky ny vakina.
Raha manana fitarainana na tolo-kevitra momba ny lahatsoratra na mpanoratra ianao dia manasa anao hampiasa ny contact form.